Date My Pet » How To Be Safe Dating
Last updated: Jan. 26 2021 | 4 Maminitsi verenga
Zvisinei uchida kuzviita, kudanana mutambo ngozi. Kwete kutaura vaeni kungava mazano kurira kupa vana asi somunhu nzira kurega kuva kuroora, rine dzinenge imwe pachena drawback. Kunze kwekuti kana uchida kuroorwa nehama yako, kuwana munhu kugara pasi kunosanganisirei kusanganidzana maziso zvachose vatorwa, kuita navo pakukurukurirana uye misangano pavo umwe-on-mumwe.
Pane ngozi zviviri pachena pano. Chokutanga ndechokuti itsva shamwari yako kuti kuonekwe kuti kuva n'anga wakakwana asi aigona chaizvoizvo kuva ine utsinye philanderer nhoroondo mwoyo-pakumedura. Vangafunga chinhu vanokutungamirirai, achitamba mitambo uye tsika pamusoro manzwiro ako. Izvozvo zvakaipa zvakakwana uye vagabondize yaizoputsika varinganiswa vanhu saizvozvo kare.
ngozi yechipiri kunyange kuipa, kunyange kana chiri zvikuru vashoma. The zvinoyevedza mweni kuti kusangana kubhawa aigona chaizvoizvo kuva vakapukunyuka musungwa dzekuno pachipatara pacho. Pane kuwana munhu anoita kuti unzwe wakachengeteka uye hwakachengeteka kwoupenyu hwako, iwe tora munhu kumusoro ari kuzoisa kuchengeteka kwako pangozi uye dzinoda kuti utore kubva dzakatevedzana dare rikati uye itsva aramu nehurongwa.
Kunyange zvazvo mikana musangano munhu akaita paIndaneti iri diki chaizvo, zvakakodzera achiedza kungwarira. Muchitsauko chino, tava kutaura sei kure boka iri rechipiri uye vadzivirirwe paIndaneti.
Kuzivikanwa mavanga Both Nzira
Kana ukasangana nomunhu mubhawa, kwokutanga pick-kumusoro kwakafanana zvakawanda yakachengeteka cheki sezvazvakaita cheki-panze. Kana kusvibisa munhu anoyevedza agere oga patafura rakatevera neako, pamberi penyu kunyange kuvapa timboona usati waita chero kuonana zvachose mhando imi tizviite kwemaminitsi mashoma kuona sei kuzvibata pamwe Mahweta, voga kana nevanhu vanopfuura. Kana vari tsika, manyawi kana chete kutsutsa hachifadzi, hazvina basa zvakadini ane looker vava, uchiri kuenda kutarira mberi nokuda. kana chete uri chokwadi zvavari romuzvarirwo, yakabudirira vanhu Unoita kuedza kuita ziso kuonana, yokudzura ushingi vanotarisana Kurambwa uye kuita kwako Kutama.
Uye kamwe uchiita kuti Kutama, iwe uri nguva dzose kutitarisira kuti zvishoma anonongedzera kuti kukuudza kuti munhu wauri kutaura idukusa dzose. Kune vanhu vemarudzi ose kutibatsira kukubatsira kuita kuti: nzira munhu madhirezi, nzira vanotaura uye muviri mutauro wavo kuti zita asi vashoma uye Waona vose pasina kunyange vachiziva kuti uri kutsvaka kwavo.
A Cowboy ngowani uye Texas drawl somuenzaniso, ndinokuudzai pakarepo apo mumwe anobva uye pavamire munzanga kamura munyika. Bleached bvudzi uye mitongo kuchipera 'dude’ ndinokuudzai zvikuru chete. huta twitches, kungomberereka maoko uye chairwo scratching zvose vanoti chinhu pamusoro munhu wauri sizing uye kukubatsira kuita sarudzo pamusoro kana unofanira zuva kana kuti vazvipembedze.
Face nechiso, une savi pakati anonongedzera dzakasiyana kuti kukuudza mari pamusoro munhu uri kufunga nokungotaura kuti hombe.
Online, unofanira hapana kuenda mberi asi chii munhu anoisa kwavo Profile uye anonyora avo e.
“Kusiyana chaicho-upenyu ukama apo uine vamwe pfungwa yokuti chii munhu Zvifambiso, chii chaizvo Dzakafanana, sei kurarama, etc., paIndaneti une hapana kuti,” anodaro Lisa Hupman, musoja cyberdater uyo akamisa WildXangel.com, website kuti anonyevera vamwe daters nezvengozi iri paIndaneti kufambidzana. “Munopa zvikuru kuvimba kupfuura Zvamazvirokwazvo yakafanira hamuna sarudzo.”
Uye chikonzero hamuna sarudzo-kana zvakanyatsorurama, kusarudza-anenge shoma padanho kuvimba amunopa ndechokuti huru wezvinyorwa zvinokudzivirira paIndaneti zvimwechete chinodzivirira neapo nutcase uyo roams paWeb: kusazivana.
Hapana nzira yokuti vanhu vaviri kuchinjana na paIndaneti kuziva tisazivikanwe chaivo vavanhu yavari kunyorera. Email kugamuchira nyika iri inbox iri panzvimbo.
Zita yaunosarudza nderimwe ukaronga uye vanofanira kutakura haana ukama chaihwo nokuzivikanwa yako.
Chero bedzi urege vako chaivo, zita rizere vapedzisire pamberi waita akavaka imwe mari chivimbo, wotanga paIndaneti ukama idzivirirwe zvakazara ndechokuti munhu anonyorera imi haana pfungwa ndiwe, kwaunogara kana kuti vanogona kuwana zvinokubatai kunze kwenzvimbo.
Kana uchifambidzana nomumwe paIndaneti, kudanana chitupa chiri kuita zvake ariko chete paIndaneti. Pane kwakakwana chinodzivirira pakati yako paIndaneti kuzviremekedza uye chaiye iwe uye kuti chipingamupinyi ndiko zvaunogona vazvidzivirire chero wacko dzaungakwanisa rombo rakaipa zvakakwana kusangana paIndaneti.
Kana uine nemhanza zvakaipa kusangana loony pane kufambidzana paIndaneti, chero waita wakachengeta rako kuzivikanwa muchivande, hapana nzira kuti vanogona zvinokunetsa here muupenyu chaihwo.
Ehe saizvozvo, kuti anoshandira kwavari zvakare. Nekuti hapana nzira kuti kuongorora kweMwana munhu ukasangana paIndaneti, uine hapana pfungwa kana chiremba wakakutumai email akasimuka yake dhigirii rugwaro rokuHarvard, sezvo ivo vanoti, kana akarayira kubvira Website muRomania. Unofanira kuva pfungwa kana vakanga zvechokwadi kushanda nokuti Peace Corps yokupedzisira maviri kana akapedza nguva yokusonesa mailbags vachingotya Penitentiary. Uye uine hapana pfungwa kana munhu uyo ​​anorondedzerwa pachavo sezvo wakazadzwa achasiya imi moga kamwe iwe ukavaudza hausati kufarira kana ukashamwaridzana kunze kwenyu pamusuo vakamirira kuti muuye kumba achibva kubasa.
Zvaizova zvakanaka kudai paiva achifanira kuongorora ndege kuti unogona kuenda kuburikidza kana ukasangana nomunhu paIndaneti. Kana ivo vanotaurwa 'mapanga’ kanopfuura katatu wokutanga Email, unogona tick bhokisi. Kana ivo vanotaurwa kuti vaishumira zvirevo akawanda mhosva dzechisimba, kuti aizotungamirira kuti tick mumwe bhokisi. Kana vaitaura nezvoushamwari hwavo Unabomber kuti yaizouya pavari kunze.
Asi hazvisi nyore.
Nzira yakanakisisa urambe ngozi paIndaneti ndiko kutevera mitemo zvitatu nyore: chengeta kusazivana wako kwenguva refu sezvinobvira; yeuka kuti kana chinhu anonzwa zvakaipa, anofanira kunge ari; vakazvicherera nokukurumidza uye zvachose paunongosvika munhuwi chinhu fishy.